RW Cumar Cabdirashiid oo u jawabay MW Sheekh Shariif | KEYDMEDIA ONLINE
RW Cumar Cabdirashiid oo u jawabay MW Sheekh Shariif
RW Cumar Cabdirashiid ayaa sheegay in MW Shariif Sheikh Axmad, uu wax ka ogaa go’aankii lagu ogolaaday Is afgaradkii lala gaaray Kenya 2009-kii.
NAIROBI, Kenya - Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, ayaa si adag uga jawaabay hadal uu xalay Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ka jeediyay xaflad loogu dabbaaldegayay, guusha badda, kaas oo ahaa in uusan waxba ka ogoyn saxiixa Is-afgaradkii MoU ee 2009 lala galay Kenya.
RW Cumar, wuxuu sheegay in Madaxweyne Sheekh Shariif, uu qayb ka ahaa go'aan -qaadashada lagu ansixiyay MoU, wuxuuna inkiradda Shariif, ku macneeyay mid khatar ah oo waddo khaldan u furi karta Madaxda, isagoo sheegay in Formaajo berri laga yaabo inuu dafiro ogaanshaha kiiska Qalbi-dhagax iyo kuwa la mid ka ah, isagoo sheegaya in uusan waxba ka ogoyn.
Sheekh Shariif, wuxuu xalay goob fagaare ah ka sheegay in inta aan la saxiixin is-afgaradka, uu la soo xariiray Cabdiraxmaan Cabdishakuur, kaas oo ah saxiixaha MoU, Isla-markaana uu u ogolaaday inuu qalinka ku duugo heshiiska, waana hadal ka hor imaanaya inkiraaddiisa ah in uusan waxba kala socon MoU.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Warsame, oo goobta uu Madaxweynihii hore ka hadlay isna hadal ka jeediyay, wuxuu sheegay in Madaxweynaha (Shariif) iyo Ra’iisul Wasaaraha (Cumar) ay labaduba wax ka ogaayeen, saxiixa is-af-gardka.
Saxiixa MoU oo laga joogo 12 sano, ayaa bar madow ku noqday Saddexdaan siyaasi, hayeeshee, ugu danbeyn, gar-yaqaannada u doodayay badda Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in ay is-afgaradkaas uu sabab u ahaa soo dhicinta badda, taas oo u noqtay guul soo daahday.
Soomaaliya ayaa kiiska dacwada badda ku garaacday dhiggeeda Kenya, kadib markii, shalay Maxakamadda Caalamiga ee Cadaaladda (ICJ), ay ugu danbeyn muranka ka saartay badda Soomaaliya ee Kenya dooneysay in ay boobto tan iyo 2005.